Fatahaadihii Baladweyne oo sanadkan ka hooseeya sanadkii hore. | Somali National Television - sntv.so
Home BENAADIR HIR-SHABELLE Fatahaadihii Baladweyne oo sanadkan ka hooseeya sanadkii hore.
Fatahaadihii Baladweyne oo sanadkan ka hooseeya sanadkii hore.
Sanadihii uga dambeeyay waxaa si is daba joog ah u dhacayay fatahaadda Webiga shabeelle uu ka geysanayo magaalada Baladweyne. Waxaana ay fadahaaddaas saameyn dhinacyo kala duwan ah ku yeelataa bulshada.
Fatahaadihii hore wax dhaqa dhaqaaq ganacsi kama jirin magaalada iyadoo biyaha ay dul sabbeyn jireen laamiga, arrintaasi waxaa ay saameyn ku yeelatay bulsahda oo ka barakacay guryahoodii iyaga oo deegaameystay meel aan si fog uga dheereyn magaalada waxaa ay degeen ceel jaalle oo ay saldhig u tahay ciidamada Amisom ee Hiil walaal.
Sanadkan ayaa ugu curtay reer Baladweyne mid ka saameyn yar sanadkii hore iyadoo ay bulshada deegaanku ay siyaabo kala duwan qeyb uga nooqdeen dadaallo lagu dhimayay wax yeelidda biyaha ay deegaankooda. Dowladda Soomaaliya iyo Dowladda deegaanka ayaa siyaabo kala duwan qeyb uga ahaa gurmadka biyaha xal loogu helayo.
culimada, wax garadka, ganacsato iyo guud ahaan qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa siisku tashi ah u jideystay hannaan ay xoog iyo xoolaba ku mieynayaan, iyagoo markaasi magacaabay Guddi ka shaqeeya arrimaha Fatahaadaha oo ay laf-dhabar ka yihiin Ganacsatada degaanka iyo qurba-joogta.
Eng. Cabdirashiid Cali Cumar (Foodeey) oo ah shakhsiga gacanta ku haya arrimaha farsamada iyo xakameynta biyaha ayaa mar uu’ u warramayay Barnaamijka Falaqeynta SNTV u sheegay in haatan ay meel fiican mareyso xakameynta biyaha Webiga shabeelle.
Cabdirasiid waxaa uu sheegay in ay bixiyeen dadaallo wax ku ool ah oo dhimmay qasaaro badan oo dhici lahaa, isla markaana waxaa uu rajo wanaagsan ka muujiyay in dhawaan ay xal kama dambeys ah u heli doonaan, isagoo ugu baaqay bulshada deegaanka in ay gacan kusiiyaan shaqada ay deegaanka u hayaan.
Previous articleCiidamada Isbaheysiga uu Sacuudiga hggaaminayo oo dilay tobbanaan Xuutiyiin ah.
Next articleKiisas cusub oo Covid-19 ah ayaa laga helay South Africa.